Aza hadino ny mametraka Linux na Windows amin'ny MacBook Air sy Mac mini | Avy amin'ny mac aho
Toy ny sisa amin'ny solosaina Apple izay manampy ny puce T2 vaovao ao anatiny, ny mety mametraha kinova Linux na kinova aorinan'ny Windows 10 mampiasa BootCamp ao amin'izy ireo dia lasa asa tsy azo atao izany.
Betsaka no hieritreritra fa "fahotana" ny fametrahana Windows amin'ny Mac fa mety ho nisy io fisokafana io tamin'ny fotoana nanombohan'ny solosaina Apple nampiasa processeur Intel. Amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny ny fampidirana ireo chips T2 sy ny Secure Boot azy, tsy afaka mametraka zavatra tsy voamarina sy nosoniavin'i Apple ianao.
Raha hametraka Windows dia tsy maintsy ajanonao ny fiarovana ny rafitra
Ity dia zavatra iray efa noresahintsika teo aloha tao amin'ny Mac, fa averinay ihany fa ny fomba tokana hametrahana Windows amin'ireo Macs vaovao miaraka amin'ny T2 dia amin'ny alàlan'ny Windows 10, ary ny fampandehanana ny fiarovana ny rafitra hahafahan'ny disk vakio ny taratasy fanamarinana Microsoft Windows izay voatendry ho azy. Amin'ity tranga ity dia hanampy Windows ny boot, fa Raha te hampiasa Linux ianao dia tsy tsara tarehy akory ny zavatra ary tsy afaka mivantana ianao.
Ny fiarovana ny puce T2 dia mahaliana ho an'ny mpampiasa saingy mahatonga ny famakiana ilay kapila ho asa tsy azo tanterahina velively ho an'ny rafitra hafa, izay manokatra lalana amin'ny tsy famelana ireo rafitra hafa hapetraka ao amin'ny MacBook Air na Mac mini misy antsika. Izany dia mitranga ihany koa ao amin'ny iMac Pro tsy dia vaovao loatra natombok'i Apple, izay mampiditra an'io chip T2 io ao anatiny ihany koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » Bootcamp » Aza adino ny mametraka Linux na kinova Windows taloha amin'ny MacBook Air sy Mac mini vaovao
Web Design Madrid dia hoy izy:
Tena nametraka Centos 7 tamin'ny MacBook Pro vaovao aho ary mandeha lavitra amin'ny hafainganam-pandehany. Nametraka rindrambaiko n tamina programa aho ary handeha tsy ho vita tsara intsony isika, mendrika ny marina ary aleoko manana Centos 7 na Debian 9 amin'ny mac alohan'ny OS, tsara no nividianako azy manokana ho an'ireo pejin-programa sy rindranasa hita ao amin'ny Internet. https://desarrollowebmadrid.com/
Valiny amin'ny Web Design Madrid
Podcast 10x09: iPad Pro tsy misy iOS hifanaraka